Ii-FAQs-Linyi Juda Science and Technology Environmental Protection Engineering Co., Ltd.
Kuthekani ngenkcazo yemveliso?
Kuthekani ngenkqubo yokuvelisa?
I-Limestone kunye namalahle afakwe ngokulandelelana kwimigqomo yokugcina ngeforklift. Iindawo ezisezantsi zemigqomo zineentsimbi zokuweyisha ezizenzekelayo. Emva kokulinganisa ngokwemali ebekwe yikhompyutheni, i-limestone kunye namalahle zixutywe. Izinto ezixubileyo ziphakanyiswe yi-skip car ngokusebenzisa ibhuloho ethambekele ukuya phezulu kwi-lime kiln, kwaye emva koko ifafazwe ngokulinganayo kwi-oven ngokusebenzisa izixhobo zokulayisha kunye nezixhobo zokutya.
Impahla ekrwada yehla phantsi kwesenzo somxhuzulane wayo kwiziko. Emazantsi ehonti, i-root blower ipholisa ikalika emazantsi ehonti. Umoya ovela ngaphantsi utshintshisa ubushushu kunye ne-lime kwaye ungene kwindawo ye-calcining njengamafutha emva kokuba ubushushu bawo bufike kuma-600 degrees.
I-Limestone evela kwi-kiln top idlula indawo yokufudumala, indawo ye-calcining, kunye nendawo yokupholisa, kunye ne-chemical reaction epheleleyo phantsi kwesenzo sokushisa okuphezulu ukubola kwi-calcium oxide (ikalika). Emva koko, ikhutshwe kwi-oven ye-oven ngumshini wokuthuthwa kwe-disc kunye nesixhobo sokukhupha umlotha kunye nomsebenzi wokukhutshwa okutywinwe, ukuqonda ukuthuthwa komoya okungayekiyo.
Kuthekani ngeempawu zemveliso?
Ikakhulu gqibezela imbuyekezo yokulinganisa ukulinganisa okuzenzekelayo kunye nolawulo lweenkqubo zokuxutywa, ukufakwa kwe-kiln kunye nokukhupha ikalika.
(1) I-automatic kunye ne-manual system zombini zixhotyiswe. Ngaphandle kokusebenza kwencwadana yebhokisi yokusebenza kwisayithi, zonke zinokulawulwa ngokusebenza kwekhompyutheni kwigumbi lokulawula eliphakathi.
(2) Idatha yazo zonke izixhobo (ezifana negeyiji yoxinzelelo, i-flow meter, isixhobo sobushushu) iboniswa kwikhompyuter kwaye inokuprintwa ngumshicileli.
(3) Inkqubo egqibeleleyo ye-WINCC yomntu-umatshini wokusebenza.
(4) Gqibezela i-Siemens yokulinganisa imodyuli ehlakaniphileyo, ukulinganisa kunye nenkqubo yembuyekezo.
(5) Iigeyiji zomgangatho wemathiriyeli ye-lime kiln ethembekileyo, iinkosi ezihlakaniphile kunye nezinye izixhobo zobunini.
(6) Inkqubo egqibeleleyo yokubeka iliso yekhamera kwisiza. Imifanekiso yexesha langempela kunye nedatha yekhompyuter yolawulo oluphakathi, bamba ngokuchanekileyo yonke ikhonkco yomgca wemveliso.
(7) Inkqubo ethembekileyo ye-Siemens PLC, i-inverter kunye nekhompyutheni ye-industrial level-level microcomputer inkqubo ehlakaniphile.
(8) Ayinabungozi kokusingqongileyo. Ngokwemigaqo-nkqubo yokukhusela indalo kunye neemfuno zemveliso, inokuxhotyiswa ngenkqubo yonyango lwe-soot kunye nenkqubo ye-desulfurization ukufezekisa ukukhutshwa kwezomthetho.
Kuthekani ngeenkonzo zakho?
Iinkonzo zokuthengisa kwangaphambili: Sikunika isicwangciso seprophase, uyilo lokuhamba kwenkqubo kunye nezixhobo zomenzi ngokwemfuno yakho ekhethekileyo.
Iinkonzo zokuthengisa: isicaka Thumela amagcisa kwindawo yomsebenzi ukuze akhokele ukufakela kunye nohlengahlengiso, uqeqesho lwabaqhubi kunye nokugqiba itshekhi kwaye wamkele kunye nawe.
Iinkonzo emva kokuthengisa: ukuthembeka Ukuseka ubuhlobo bexesha elide, siya kuhlawula rhoqo utyelelo lokubuyela kubathengi.
Ndingandwendwela umzi-mveliso wakho?
Ewe. Abathengi abaninzi basekhaya nakwamanye amazwe bandwendwela umzi-mveliso wethu minyaka le.
Ide kangakanani iwaranti yesixhobo sakho? Ngaba uyazibonelela iindawo ezisecaleni?
Ixesha lethu lewaranti ngunyaka nje jikelele. Sinokubonelela ngamacandelo asecaleni.
Ngaba uyalubonelela ngoqeqesho lokusebenza kwezixhobo?
Ewe. Sinokuthumela iinjineli eziziingcali kwindawo yokusebenza yofakelo lwezixhobo, uhlengahlengiso, kunye noqeqesho lokusebenza. Zonke iinjineli zethu zineencwadi zokundwendwela.
I-30% yediphozithi ye-TT, i-70% yentlawulo yebhalansi ngokuchasene nekopi yamaxwebhu okuqala okuthumela.
I-Calcium oxide esetyenziswa kwezoLimo, ICalcium Hydrooxide Processing, ICalcium oxide Production Line, Ukwenza iCalcium Hydroxide, Izixhobo zokuLungisa iCalcium Hydroxide, Ukwenza iCalcium Hydroxide,